Sawirro: Booliska UK oo soo bandhigay wadaad lala xiriiriyey weerarkii London - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Booliska UK oo soo bandhigay wadaad lala xiriiriyey weerarkii London
Sawirro: Booliska UK oo soo bandhigay wadaad lala xiriiriyey weerarkii London
London (Caasimada Online) – Sida aan warkeena ugu danbeynay ku sheegnay Booliska dalka Britain ayaa macluumaad hordhac ah ka bixiyay weerarkii shalay lala beegsaday xarunta baarlamaanka dalkaasi ee magaalada London.
Booliska waxa uu sheegay in weerarka ay ku dhimatay ilaa 5ruux, halka ilaa 40 kalana ay ku dhaawacmeen, dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ah nin boolis ah oo lagu magacaabo Keith Palmer ”48-jir”
Wargeysyada dalka Britain waxa ay sheegen in Gaariga si ula kac ah loo jiirsiiyay ugu yaraan 12 ruux oo marayay buundada Westminster ee agagaarka dhismaha baarlamaanka UK oo gebi ahaantiisba hadda la xiray, waxaana dhaawac ka dhashay weerarka gaariga ku dhintay haweenay uu markii hore soo gaaray dhaawac.
Waxa ay intaa ku dareen Wargeysyada in qof ka soo dagay gaarigaaasi uu tooreey ku weeraray askari Booliis ah oo taagnaa dibedda dhismaha baarlamaanka.
Booliska Britain ayaa goordhow shaaciyay magaca Ruuxii ka danbeeyay weerarka oo ahaa wadaadka lagu magacaabo Abu Izzadeen.
Wadaadka lagu eedeeyay weerarka ee lagu magacaabo Abu Izzadeen, ayaa iminka ku jira Xabsi ku yaalla magaalada London, waxaana la xaqiijiyay in weerarkaasi ay fuliyeen shaqsiyaad si gaara isaga ugu adeega.
Abu Izzadeen ayaa iminka u xiran tuhun la xiriira Argagixisanimo, waxaana la xaqiijiyay in weerarkaani uu sii xoojiyay tuhunka wadaadka Abu Izzadeen.
Warbaahinta qaar ayaa sheegeysa in wadaadka Abu Izzadeen ay ciidamada ku khaldeen sawirkan hoose oo ah ninka weerarka ka dambeeyay oo dhaawac ah islamarkaana u muuqaal eg “wadaadka” xabsiga ku jira, ee Abu Izzadeen.